—— Imikhiqizo ——
Iloli le-LXD260C Elizenzekelayo Likhishwe Upende / Ukususwa Kwerabha nge-Ultrahigh Pressure Water
Singabakhiqizi abangochwepheshe abakhulu kunabo bonke baseChina kanye nefektri yeRooming Paint Removal / Rubber Ukususwa. Iloli liyadingeka, Isibonelo: iloli le-Jac, i-K5L cab, Injini: i-Yuchai, i-YC4S160-50, i-Gearbox: amagiya asheshayo, i-6DS60T, i-axle engaphambili: i-3.5T, i-axle yangemuva: 8T, i-crossbeam: 230 * 75 * 6, isondo: 10R22 .5, isondo lokuhlanza ubukhulu bezinqola: 6800 * 2450 * 600 ， isisindo esikhulu: 16T, umthwalo wokulayisha: 9.8T
Singabakhiqizi abangochwepheshe abakhulu kunabo bonke baseChina nefekthri yokususa umaki komgwaqo. Umshini wokupenda wokumaka umgwaqo we-LXD900 usetshenziselwa ikakhulukazi ukususa imigqa kapende ebandayo. Ikhanda lensimbi elisikiwe iTupungato linzima futhi lijikeleza ngokushesha. Inhloko yokusika inempilo yokusebenza ende, futhi kulula ukuyilayisha nokuyithula.
Singabakhiqizi abangochwepheshe abakhulu kunabo bonke baseChina nefekthri yokususa umaki komgwaqo. Injini: 11.0HP (injini eqalisa ngesandla opholile ophethiloli ophethiloli abane); Ukusebenza ukushuba: kushintshwe ngokuya ngesimo sendawo yomgwaqo, imvamisa ingaphansi kuka-3mm.
Ukususwa Komaka Wokumaka Umgwaqo we-LXD90-3B Nge-High Pressure Water With System System
Singabakhiqizi abangochwepheshe abakhulu kunabo bonke baseChina kanye nefektri yokususwa kokumaka emgwaqweni okuphezulu ngohlelo lokuncela. Ingasusa ukumakwa komgwaqo ngaphandle kokulimaza ingaphezulu lomgwaqo, futhi amanzi angcolile kanye nezinsalela kungadonswa ethangini lamanzi angcolile, Ithangi lamanzi angcolile lingahlala cishe amanzi angama-700kg amanzi angcolile (omunye amandla ngokucela).
Ukususwa Komaka Wokumaka Umgwaqo we-LXD90-3A
Singumkhiqizi wobuchwepheshe waseChina omkhulu kunabo bonke kanye nefektri yokususwa kokumaka emgwaqweni okuphezulu. Isetshenziselwa ukususa zonke izinhlobo zolayini bokumaka umgwaqo ngamanzi ayo acindezela kakhulu inezinzuzo zokusebenza okulula, ukugcinwa okulula, ukusebenza kahle okuphezulu, ngaphandle kokulimaza indawo yomgwaqo, imvelo enobungane.
Ukususwa Kokumakwa Komgwaqo kwe-LXD D-390 Thermoplastic Road
Singumkhiqizi wobuchwepheshe waseChina omkhulu kunabo bonke nefektri yokususwa kokumakwa komgwaqo nge-thermoplastic. Kuyimishini yobuchwepheshe esetshenziswa kabanzi ukususa izintambo zokumaka umgwaqo. Umshini unezinzuzo zamandla aqinile, isivinini esikhulu, ukusebenza okulula nokuphephile, ukudlidliza okuphansi, umsindo nokuvikela uthuli, njll.
Ubuhlalu be-Micro Glass
Singabakhiqizi abangochwepheshe abakhulu baseChina nefektri yobuhlalu beglasi elincane. I-Glass Ubuhlalu yizingxenyana ezincane zengilazi ezisetshenziswa ekupendweni kokumakwa komgwaqo nakumaka oqinile womgwaqo ukukhombisa ukukhanya kubuyele kumshayeli ebumnyameni noma ezimweni zezulu ezingezinhle - kuthuthukisa ukuphepha nokubonakala. Ubuhlalu beglasi budlala indima ebaluleke kakhulu ekuphepheni komgwaqo.
Upende Wokumaka Umgwaqo Ojwayelekile
Singabakhiqizi abangochwepheshe abakhulu kunabo bonke baseChina nefektri lepende lokumaka umgwaqo elijwayelekile. I-Cold Solvent Road Marking Paint ingumkhiqizo ofanele imvelo, uqukethe i-Modified Acrylic resin, i-colgifate enemibala, izinto zokugcwalisa nokunye. Ingasetshenziswa ngempumelelo kumishini yokufafaza engenamoya noma yomoya.